भाईपछि माधव नेपालले आमा–छोरालाई पनि बनाए केन्द्रीय सदस्य ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
भाईपछि माधव नेपालले आमा–छोरालाई पनि बनाए केन्द्रीय सदस्य !
काठमाडौं, १ कात्तिक ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नै सहादर भाईलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको समाचार सेलाउन नपाउदैं झापाबाट अर्को खबर आएको छ ।
दशैं मनाइरहेका बेला झापाका शारदा शर्मा घिमिरे र छोरा अशेष घिमिरेका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले खुसीको उपहार दिएको हो । आमा छोरा दुवैजना एकैपटक नेकपा एसको केन्द्रीय सदस्य र झापा जिल्ला सहइन्चार्ज बनेका छन् ।
नेकपा एसले शनिवार जारी गरेको अन्तरपार्टी सर्कुलरमा आमालाई पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र छोरालाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनय गरिएको उल्लेख छ । कार्यक्षेत्र पनि दुवै आमा छोरालाई झापा नै तोकिएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिका- १०,धुलाबारीका बासिन्दा शारदा शर्मा चारआलीस्थित शहीद दशरथ चन्द माविकी शिक्षिका हुन् । उनी आगामी मंसिरबाट अवकाश हुँदैछिन् ।
त्यस्तै अशेष अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो समय नेकपा एसका उपमहासचिव डा।विजय पौडेल सञ्चालक रहेको जनता टेलिभिजनमा समेत कार्यरत छन् । पेशाले इन्जिनियर अशेष नेकपा एसबाट सम्भवतः सबैभन्दा कान्छो केन्द्रीय सदस्य हुन् । यता नेकपा एमालेमा रहँदा विधी, विधी भनेर सबैभन्दा धेरै कराउने नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको विधी पनि नांगिएको छ ।
आफ्नै हात जगन्नाथ स्टाइलमा एस पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्ना आफन्त र वरिपरी घुम्नेहरुलाई धमाधम महत्पुर्ण जिम्मेवारी दिए पछि हिजो विधीको लागी एमाले फुटाएर माधव नेपाल तिर लागेको भन्नेहरु अन्तिममा हिस्स भएका छन् ।
माधव नेपालले आफ्ना भाइदेखी भान्जा सम्मलाई केन्द्रिय सदस्य बनाएका छन् । आफ्ना पीए देखी वरिपरी घुम्नेहरुलाई पार्टीमा महत्वपुर्ण भुमिका नेपालले दिएका छन् । विधी पद्धतीलाई टोपी लागाउँदै माधव नेपालले मनमौजी गरे पछि नेकपा एसमा भाँडभैलो मच्चीएको छ ।
नेकपा एसले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएर अन्तर पार्टी निर्देशन जारी भएसँगै असन्तुष्टी बढेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा केही नेताले आफ्ना मान्छे टिपेर ल्याएको र मापदण्ड तथा विधि पद्दतिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टी बढ्न थालेको हो ।
हिजो तत्कालीन नेकपा र एमालेमा केपी ओलीले विधि पद्दति र मापदण्ड नमानेको भनेर विद्रोह गरेका नेताहरूले नै नेकपा एसमा व्यक्तिवादी प्रवृति देखाएको अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए ।
नेकपा एसका अन्य सबै जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरु पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका छन् । तर, अनेरास्ववियूका अध्यक्षलाई भने केन्द्रीय सदस्य नबनाई उनीभन्दा जुनियर र नेताका पिएहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिएको भन्दै विरोध भएको छ ।
पराजुलीले भने आफू केन्द्रीय कमिटीमा नपरेकोमा कुनै गुनासो नरहेको तर केही नेताले माधव नेपाललाई समेत गुमराहमा राखेर केन्द्रीय सदस्यहरूको छनौट गरेको बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी सदस्यको चयनप्रति पार्टीका पदाधिकारीहरुले समेत असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । ३ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गर्दा विधि,पद्दति र मापदण्ड नबनाइएकोमा असन्तुष्टी बढेको नेताहरूले बताएका छन् ।
नेकपा एसले संगठन विस्तारका लागि ३ महिने अभियान घोषणा गरेको छ । यस क्रममा एक वडा एक सय संगठित सदयस्य र एक हजार पार्टी सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।